Rainbow Fontana, Banpo Bridge, Moon Rainbow, Banpo Bridge - Seoul
Ny halavan'ny tetezana: 570 m
Ny halavan'ny loharano: 1140 m
Rantsana rano: 190 t
Fiovan'ny tohodrano: 20 m
Na dia ny tetezana mahazatra indrindra aza dia azo atao amin'ny asan'ny zavakanto - mila mahafantatra ny fomba hanaovana izany ianao. Ohatra, araho ny ohatr'ireo injeniera Koreana izay nanangana rafitra mahagaga - loharano iray. Momba ny loharano am-bava izay horesahina ao amin'ny lahatsorantsika.
Tetezana tsy mahazatra
Ny renivohitr'i Korea dia mijoro eo amoron'ny reniranon'i Khan (Khang), izay mizara izany antsasak'adiny. Tamin'ny alalan'izany dia nanipika tetezana 27 izay mampifandray ny faritra avaratry ny tanàna miaraka amin'ny faritra atsimo. Ary anisan'izy ireo ny Fango Rainbow no ekena ho tsy mahazatra indrindra: ny mponin'i Seoul, sy ireo vahiny maro ao an-tanàna, dia miaiky izany.
Raha vao tsy miantso ny Tetezan'i Banpo ao Seoul izy ireo : loharano loharano, ary na ny avana amin'ny volana aza! Ny zavatra dia tsy hoe tetezana mampifandray ny banky roa izany. Voalohany indrindra, loharano tsara tarehy iray mamelatra ny tanànan'i Korea lehibe indrindra, ary faharoa koa, io no rafitra lava indrindra manerana izao tontolo izao.
Ny faritra Banpo, izay misy ny tetezana, dia mandray anjara amin'ny tetikasa iray natao nandritra ny 30 taona. Ny tanjona dia ny hampitomboana ny toetran-tsarintanin'i Seoul sy ny fizahantany iray amin'ireo sehatra fitantanana ara-toekarena ao Korea Atsimo. Ankoatra ny fananganana ny loharano, ity tetikasa ity koa dia mitaky ny famoronana ny fotodrafitrasa fizahantany ao amin'ny distrika, ny fametrahana toeram-pambolena sy fialam-boly manerana ny renirano.
Mahaliana ihany koa fa ny loharano ao amin'ny Banpo Bridge ao Seoul dia manampy amin'ny fanatsarana ny tontolo iainana. Ny tsiambaratelo dia ny rano ho an'ny loharano dia nalaina avy ao amin'ny renirano, ary dia miverina ao izany, fa rehefa avy nandalo ny rafitra fanivanana, noho izany dia nazava.
Inona ny tetezana mahaliana ho an'ny mpizaha tany?
Mora ho azy ny famolavolana, saingy noho ny "fofony" dia ny tetezana mahazatra dia nivadika ho loharano tokana. Ny vokatra mahatsikaiky "avana", manintona mpizahantany manerana izao tontolo izao ho an'ity toerana eto Seoul ity, dia tratra noho ny fialantsasatra ny rano, indrindra fa nasongadina. Ny lanjan'ny 10 000 LED dia manazava amin'ny loko isan-karazany amin'ny rano, izay atsipy eo amin'ny 20 metatra mialoha ny lavaka, noho ny paompy matanjaka napetraka teo amin'ny tetezana. Ary izany rehetra izany - amin'ny feon'ny mozika, isaky ny miavaka. Ny fandaharan'io loharano io dia ahitana hira an-jatony maro izay manandratra an'io toetrany io ho fahazavana mahagaga sy mozika.
Ny mpizaha tany dia tsy mankasitraka fotsiny ny hazavana mamirapiratra, fa afaka mahita loko marevaka marevaka. Izy ireo dia mamakivaky ny tetezin'ny loharano ao Seoul araka ny fandaharam-potoana:
Mon-Thurs: 12:30, 15:00, 20:00, 20:40, 21:20;
Fri: 12:30, 15:00, 20:00, 20:40, 21:20, 22:00;
Sat-Sun: 12:30, 15:00, 17:00, 20:00, 20:40, 21:30, 22:00.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny Tendrombohitra Rainbow Springs any Seoul?
Azonao atao ny mahita ity fahagagana ity amin'ny fomba maimaim-poana tanteraka - efa ampy ho any amin'ny faritra Bampo, mankany amin'ny reniranon'i Khan. Tsara kokoa ny mivezivezy eto amin'ny bisikileta - fomba fitaterana fialamboly ho an'ny mponina ao Seoul, na metro (mila mankany amin'ny fiantsonana Seobinggo) ianao.
Ilaina ny mandinika ny lalao ny rano sy ny taratra hazavana avy any amin'ny faritra atsimon'ny Reniranon'i Khan. Misy zaridaina maitso malaza, izay manokatra ny jiron'ny jiron'ny mpizahatany any an-drenivohitra koreanina, ary any aoriana dia afaka mahita ilay tendrombohitra malaza Namsan sy ny tilikambon'ny N. Noho izany, tsara ny mankany amin'ny loharano ao Seoul ao anaty haizina.
Masoivohon'i Grenada any Kazakhstan
Kitapo ho an'ny trano fonenana
Ny Kardashian-Jenner dia nanolotra ny Karatra Krismasy nentim-paharazana
Lasa tia fitiavana rugby-bustler i Sophie Turner
Proteinina bara amin'ny tananao
Nivoaka ny rano - inona no tokony hatao?
Ny fanavakavahana ara-pananahana amin'ny fiterahana - vokany
Tazo mitahiry fako miaraka amin'ny banana ao amin'ny oven - recipe
Ny fakam-panahy - rahoviana?
Ilay mpanakanto dia manisy ny masony amin'ny zavatra tsy mananaina, ary izany no mivoaka avy amin'izany!
Ahoana no hanamarinana ny fisian'ny atody?
Fanitsiana fanadiovana - ny fanombanana ny vokatra tsara indrindra sy ny fomba fanabeazana an-trano
Herpetic keratitis - ahoana no hisorohana ny fahasarotana amin'ny loza?
Kafe mangatsiatsiaka nohosorana - tsara sy ratsy